Top Xiriirka saareyaasha iyo Shirkado cusub | Shiinaha Top Xiriirka Factory
Xiriirka Top waxaa loogu talagalay in dhigma madaxa, qoorta of insulators polymer, insulator galaas, insulators nooca post-si kaari codsatay, dhinaca top of insulator. Insulator kulanka top loo isticmaalo kirishbooyada dhashay anteenada guraa in shabakadaha gudbinta awood MV iyo HV. Tie top for insulator polymer waxaa la sameeyey ee aluminium daboolay steel, qalabka aluminium. Waxyaabaha ee xiriirka top heliformed ku xiran tahay nooca wax of kaari in lagu dabaqo leh, ACCC ama ACSR. Kulanka Preformed insulator top intaa ku qalabaysan rube xirmado yaraadaan abrasion of kaari iyo insulator.